अन्त:शुल्क स्टिकर खुलेआम दुरुपयोग - समाचार - कान्तिपुर समाचार
माघ ७, २०७३-राजधानीको एउटा किराना पसलमा साहु र कामदार चुरोटका बट्टामा टाँसिएको अन्त:शुल्कको स्टिकर धमाधम उक्काइरहेका थिए । यो किन उक्काउनुभएको साहुजी ? ‘एउटा स्टिकर दुई रुपैयाँमा बिक्छ, कमाइ होस् भनेर पसल खोलेको हो, स्टिकर बेचेर पनि थप आम्दानी,’ उनले सहजै जवाफ दिए । कति आम्दानी हुन्छ ? ‘मेरो पसलमा दैनिक ६ पेटी (२० बट्टा) सम्म चुरोट बिक्री हुन्छ, ६ पेटी चुरोटका बट्टामा रहेको स्टिकर बेच्दा दैनिक २ सय ४० रुपैयाँ कमाइन्छ,’ नयाँ बानेश्वरका ती किराना सञ्चालकले भने । कसले किन्छ यो ? उनले भने, ‘एउटा मान्छे आएर किन्छ, उसैले सिकाएको हो, अरू पसलबाट समेत लैजान्छ ।’
ट्रम्पको शपथ आज ›